Xiddig ka tirsan Barcelona oo usoo bandhigay goolhaye Gianluigi Buffon inuu qaato booskiisa Koobka Adduunka | Ciyaarside.com
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic ayaa wuxuu qirtay inay tahay wax murugo leh in uusan goolhaye Gianluigi Buffon ciyaari doonin Koobka Adduunka ee sannadka soo aadan ka dib markii xulkiisa Italy uu ku guuldarreystay inuu usoo baxo dhacdada Russia.
Rakitic oo u ciyaara Barcelona ayaa caawa oo Arbaco ah wajihi doona Buffon oo goolka u qabta Juventus kulan ka tirsan koobka UEFA Champions League, xiddiga heerka caalami ee dalka Croatia ayaana caddeeyey inuu xumaan u dareemayo goolhaye Gianluigi Buffon.
Rakitic ayaa saxaafadda u sheegay: “Haddii ay noqoto inaan sharraxaad ka bixiyo goolhaye Gianluigi Buffon waxaan dhihi lahaa waa wajiga kubadda cagta adduunka.
“Markii aan arkay Gianluigi Buffon oo ilmeynaya kana haray Koobka Adduunka, waxaan jecleystay inaan siiyo booskeyga Koobka Adduunka, bedelkeyga isagu ha aado Koobka Adduunka.
“Maxaa yeelay Gianluigi Buffon wuxuu ina siiyey wax walba oo aan uga baahneyn haddii aan nahay dadka jecel kubadda cagta. Haddii caruurta yaryar la dhaho soo xusha kooxdiina riyada ee kubadda cagta durba waxay goolka usoo xulanayaan Gianluigi Buffon.
“Haddii aad aragto Gianluigi Buffon oo ilmeynaya adna waad la ilmeyneysaa, waana ay adag tahay inaad ka sheekeyso wixii uu dareemay markii uu ka haray Koobka Adduunka ee sannadka soo aadan”.
Rakitic ayaa wuxuu sidoo kale caddeeyey inuu xumaan u dareemayo halyeeyga qaranka Italy Buffon maadaama uusan helin sagootintii uu u qalmay.
“Ceeb ayey iila muuqataa in ciyaaryahan jooga maqaamka Buffon oo kale uusan sagootintii uu u qalmay ku heli doonin Koobka Adduunka, taasoo aan aaminsanahay inay aheyd riyada Buffon,” ayuu hadalkiisa ku daray laacibkii hore ee Sevilla.
“Haddii aan awoodo, Buffon ayaan siin lahaa booskeyga Koobka Adduunka, maxaa yeelay anigu weli waan yarahay waxaana awoodaa inaan markale ciyaaro Koobka Adduunka.”
Italy ayaa Koobka Adduunka ka hartay ka dib markii ay celcelis ahaan guuldarro 1-0 ah kala kulmeen xulka Sweden kulan laba lugood ah.